Ujabulele ukusinda kwezimbuzi zakhe owaseMpendle – SIVUBELAINTUTHUKO
KUPHELE ukuqwasha kowesilisa waseMpendle obesenezinsuku ezintathu engabuthi quthu ubuthongo ecabanga ngomhlambi wezimbuzi zakhe eziwu-9 ebezivaleleke emgedeni osesebeni lwesiziba emfuleni uMkhomazi abengakwazi ukuzihlenga ngenxa yomfula obudla izindwani.
UMnu Sipho Mhlophe waseStoffelton uthe naphezu kokuba uyakhuluma ngezimbuzi zakhe eziyigugu kuyena usizwe ngabase-Start Rescue, abe-Society for the Prevention of Cruelty to Animal (SPCA) eHowick nabezimo eziphuthumayo base-Netcare 911 eBallito abalusukumele phezulu udaba lwezimbuzi zakhe ngoMsombuluko ebezizomuka nomfula ukuba bezingatakulwa. “Kangihlali ekhaya eMpendle kodwa ukhona umelusi ozibhekile okuwuyena ohlabe umkhosi ngokuvaleleka kwezimbuzi emgedeni osesebeni lomfula. Bese kuphele izinsuku ezintathu zivalelekile emuva kokuna ngamandla kwemvula ngempelasonto okuthe uma ziyibaleka ziyocasha emgedeni kanti kakusezukuba lula ukuphuma ngoba umfula bese ugcwele. Kuthe uma ngizwa ngokuvaleleka kwazo ngabikela usibali wami osebenza e-SPCA eHowick okunguyena oluthathele phezulu udaba wathinta zonke izinhlaka ezibhekelele izilwane kwenziwa imizamo yokutakulwa kwazo. Abase-Netcare bafike nesikebhe okuyisona esilekelelile ukugibelisa izimbuzi zikhishwa emgedeni kunqanyulwa kusona lesi siziba ebesiyingozi. Bangibangule iva abezimo eziphuthumayo ngakwazi ukulala ubuthongo izimbuzi zami sezisegcekeni ekhaya,” kujabula uMnu Mhlophe.
Usihlalo we-African Farmers Association in South Africa (AFASA) KwaZulu-Natal uMnu Mbongeni Sikhakhane unxuse abafuyi ukuba mehlo made emfuyweni yabo ngalesi sikhathi sezimvula ezinkanise kwezinye izifunda esifundazweni. “Siyakuqonda ukuthi kasisenawo amadlelo abiyelwe kodwa abantu mabahlale bengemuva kwemfuyo yabo ukuze bakwazi ukuyiqoqa kalula uma kushintsha izulu. Ukubheka imfuyo kusiza nokuthi amasela angazenzeli umathanda emihlambini yabantu osekuphenduke insakavukela umchilo wesidwaba esifundazweni sethu iKwaZulu-Natal,” usho kanje.
Okhulumela abezimo eziphuthumayo e-Start Rescue uMnu Andreas Mathios ubonge ngesitatimende asikhiphile amavolontiya abo asebenze ngokuzikhandla elekelelana nabase-SPCA nabase-Netcare 911 ukuhlenga izimbuzi ngempumelelo zakwazi ukubuyela kumninizo ziphila futhi ziphelele.
OwaseMandeni ukhuculule ukungcola kwaChappies naseBhidla
TSEPO MOTLOKOA UMASIPALA waseMandeni uhlaba ikhwele kubantu abakhele lomkhandlu ukusebenziswa izindawo ezihlinzekiwe ukulahla udoti ukuvika ukunubuzeka kwemvelo nokuthi abantu bahlale bephilile ngokuphefumula umoya onempilo. Abe-SWIFT baphume umkhankaso wabo kade kuvulwa izikole bahlanza ezinye izindawo ezakhele umgwaqo wakwaChappies naseBhidla njengoba bese kulahlwa udoti noma kanjani lokho obekwenza indawo kube sengathi kayinakekelwe ngokwenhlanzeko. Lokhu kuhlanzwa kulandela izikhalo kumbe […]
TSEPO MOTLOKOA ZIQUKETHE izithelo ezinhle izinhlelo zelungu leSishayamthetho saKwaZulu-Natal uMhlonishwa Makhosi Zungu zokuhambela izikole ezingaphansi kwaseMandeni Parliamentary Constituency ngenhloso yokubheka lezo zikole ezingama-high school ukuthi zingasizwa ngani ukwakha ikusasa eliqhakazile labafundi. UMhlonishwa Zungu utshele Isivubela Intuthuko engxoxweni ekhethekile ukuthi ukuhambela kwabo izikole zaseMandeni kungukunanela izwi lomphakathi lapho unxusa khona kuhulumeni ukulekelelwa ikakhulukazi kwezemfundo. Lapha ihhovisi likaMhlonishwa Zungu belihambisana […]
UMKHANDLU WASEMANDENI UNIKEZELE NGOMTAPO WOLWAZI
MAGAYE CELE UMKHANDLU waseMandeni enyakatho yeKwaZulu Natal sewethule ngokusemthethweni uhlelo lomtapo wolwazi lukamahamba nendlwana phecelezi (Mobile Library). Ukwethulwa ngokusenthethweni kwalolu hlelo bekukade kuqhubeka esigodini sakhona eMandeni, eMcambini kuWard 09. Abantu abasha abangabafundi baseMacambini babe ngabokuqala ngqa ukuba bakwazi ukuthi basebenzise lo mtapo wolwazi ongumahamba nendlwana. UMkhandlu waseMandeni uholwa nguKhansela Thabani Mdlalose oluchaze njengolubalulekile kakhulu lolu […]
USomlomo waseKZN uhlola izikole esifundazweni
I-AFASA KwaZulu-Natal ikhuthaza ezolimo kwabesifazane